Você também pode acessar o blog de e-commerce do eCommerce, como um blogueiro iniciante, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti ese akafanana ndechekushandisa kwemavara ezvinyorwa. Kuisa imwe pfungwa painel yako yakaratidzirwa mavara (kana dhizaini tipográfico) hazvina kusimbisa zvinoshamisa kuti kugadzira yako saiti inogadzirisa uye kuve nechokwadi chekubudirira kwayo.
Hechino chinhu, nós não sabemos qual é o modelo do WordPress para você!.
Uyezve, iwe unoshaya painel huwandu hwekunakisa kwewebhu tipografia iyo inowanikwa online.
Zvechokwadi, kana iwe uchida kuve nechokwadi chokuti iyo mhando yaunosarudza mitoro yakavimbika painel mamwe makombiyuta, unofanira kusarudza "webhuti yakachengeteka".
Em 25 yedu yakaisvonaka yewebhu yakachengeteka mafonti, iwe uchava nechokwadi chokuti unoshamisa tipografia na web site de web site yako iyo inoshanda nguva yose, pakuguma kwechikamu ichi!
2 I25 Fontes seguras da Web lindas KwaWebsite Yako
2.2 3. Helvética
Mafaira akachengeteka eWebhu encontrou duas fontes anowanzotanga kushandiswa kune dzakawanda zvezvigadziri – makombiyuta, foni dzemafoni, maTV, uye mahwendefa.
Munyika yakanaka, é um dos personagens mais famosos do mundo, e mais conhecido como webausa yako. Muzvokwadi, kune zvibvumirano kune rudzi rwemafonti aunogona kushandisa.
Kana iyo simboti yawakashandisa yakanga isina kuiswa pamakombiyuta emunhu, ipapo webhusaiti yako ichadzoka kufonti yemutauro, yo dzimwe nguva ingaguma isingaverengeki.
Quando você cria sites, criadores de sites oferecem Nhamba Dzakawanda por Webhu kuti Microsoft yakabudiswa muC1996 seyero yemahofisi akawanda webusaiti. Izvi zvakagadzirwa zvemashoko pakupedzisira yakava "webhutete yakachengetedzwa", nokuti pasinei nekombiyuta, mafonti achaonekwa zvakanaka pawebsite yako.
Zvechokwadi, anenge ose webhusaiti nhasi ari kushandisa imwe nzira yewebhu yakachengetedzwa fomu. The Times New Roman, zvinoonekwa apo vashandisi vari kushanyira webhusaiti yako kana vasina iyo chaiyo kana tsika.
Painel nzira dzakawanda dzaungashandisa kuwedzera mafaira aya mujiji rako rewebhu, asi kana iwe usati uri mukuronga kana unenge usiri-kwete-unyanzvi hwehutano, iwe unogona kungonyora kopi yeCSS código yakasvibiswa.
Arquivo Takura musoro wako weheta.php
Fonte da fonte Kopa / código padrão
Takura yako style.css, isa podhesi yepafaira kuti uchinje texto da fonte yeunosarudza.
I25 Fontes seguras da Web lindas KwaWebsite Yako